Posted by ZT at 3:42 PM
US မှာလဲ ကရားဆူးတွေ ရှိတယ်။ အံ့သြစရာ ကောင်းတာက အဲလိုလုပ်တဲ့ လူတွေကို general ချကြည့်ရင် တခြားနိူင်ငံမှာ မွေးပြီး ကြီးခဲ့တဲ့လူ များတယ်ဗျ။ ဒီက ကျောင်းတွေမှာ အဲဒီလို အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မလုပ်အောင် လုပ်ရမှာ ရှက်အောင် လုပ်တဲ့သူကို အထင်သေးအောင် ကျောင်းတွေမှာ train တော့ ဒီမှာမွေးပြီး ဒီမှာကြီးတဲ့ လူတွေ ဒါမျိုးသိတ် မလုပ်ဖူး။ ဒါတောင် တခါတလေ လမ်းကူးတာ ဇိမ်နဲ့ သေချာ နှေးနှေး လျှောက်တဲ့ ကရားဆူးတွေ တွေ့တယ်။ Asian တွေ၊ Latin America ကလာတဲ့သူတွေ၊ Middle Eastern တွေ အနေများတဲ့ ရပ်ကွက်တွေ ရောက်ခဲ့ရင်တော့ သည်းခံလော့... ငါ့ရှင်......
ဗဟုသုတ တစ်ခု တိုးရပြန်ပေါ့..
ကရားဆူးစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေလဲ အများကြီးတွေ့ခဲ့ဖူးတာ သတိရလိုက်မိတယ်။
ကရားဆူးဆိုတဲ့ စကားလုံး ခုမှ ကြားဖူးပေမယ့် ကရားဆူးလူတွေ အများကြီး မြင်ဖူးတယ်။
ကရားဆူးဆိုတဲ့ စကားလုံး ခုမှ ကြားဖူးပေမယ့် ကရားဆူးလူတွေ အများကြီး မြင်ဖူးတယ်။ It's totally true for me as well.
ကိုဇက်တီ ရေးထားတာလေးက အစီအစဉ်ကျနသလို ထိထိမိမိလဲရှိပါတယ်... စလုံးအများစုရဲ့အကျင့်နဲ့ ဒီမှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို မျက်လုံးထဲမြင်အောင်ရေးထားတာကောင်းတယ်... အဲလိုလူမျိုးတွေက နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ စကာင်္ပူမှာက ပြောရလောက်အောင်များကြတယ်... သူငယ်ချင်းတွေဖတ်ဖို့ ညွှန်းလိုက်ပါအုံးမယ်...
အစ်ကိုရေ... ဒီပိုစ့်လေးကို မဗေဒါပိုစ့်မှာ လင်ခ့်လုပ်ထားလို့ လာအကြောင်းကြားတာပါ... စိတ်မဆိုးဘူးဟုတ်?
စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ကျေးဇူးတောင် တင်ပါသေးတယ်။ :-)